Yonke iOfisi yaseKhaya ifuna eNye! | Martech Zone
Ngaphezulwana konyaka ophelileyo (2005) bendisenza isuntswana lokubonisana ecaleni kwaye bendifuna ukufumana izixhobo ezitsha zekhaya ezijongana nekhaya. Ndithenge ikhompyuter entsha, i-netgear router engenazingcingo kunye namakhadi ngaphandle kwamacingo… kwaye olona tyalo mali luyi-LinkStation yam.
I-LinkStation iqhagamshela ngqo kwi-router yam engenazingcingo kwaye ine-250Gb yendawo. Ujongano lomsebenzisi lwe-LinkStation lulula ngenene… Ndikwazile ukuseta idrive yabantwana bam bonke, ikhompyuter yam, isikhombisi somculo esiphakathi, kunye nesipele somxhasi. I-LinkStation ikwaze nevenkile ye-USB ekwabelwana ngayo ngomshicileli, isoftware ye-FTP, kunye nesoftware yokuhambisa imithombo yeendaba. Oko kundivumela ndibeke umshicileli wam kude neekhompyuter nakwezinye iindawo ezifanelekileyo.
Into endiyithandayo, nangona kunjalo, inendawo eninzi kude neePC zam nakumthombo womnatha. Nanini na xa ndigqiba iprojekthi, bendiyikopa phaya. Nanini na xa ndikhuphela kwaye ndifaka isoftware, bendikopa ngaphaya phaya, kwaye nanini na xa ndifuna ukwabelana ngezinto phakathi kweekhompyuter- sidlulisa iifayile kwisabelo phakathi kwazo zonke. Akukho 'zabelo zeefolda', akukho fakelo lwediski, akukho ngxaki kwaphela.
Malunga neenyanga ezisixhenxe ezidlulileyo, ikhompyuter yam yatyholwa ngokupheleleyo luhlaziyo lweNorton Antivirus olwalukrwele icandelo leebhutsi. Kwafuneka nditshintshe idrive kwaye ndaphinda ndalayisha yonke into ukusuka ekuqaleni. Isenokuba liphupha elibi ngaphandle kwalonto ndinayo yonke into ilayishwe kwiidrive network. Ndabuya emva komhla okanye ndaye ndaphoswa kukubetha.
Kunyaka onesiqingatha kamva kwaye ngoku omnye wabaxhasi bam wandicela ukuba ndiphinde ndenze uhlalutyo kuye. Kwakukudala kangangokuba ndandingasazifaki izicelo. Kwimpelaveki ephelileyo, nditsibe kwisabelo ndaphinda ndalayisha usetyenziso. Kule mpelaveki, ndikhuphele uhlalutyo oludala kwaye ndikwazile ukukhangela uhlalutyo ngale njikalanga. Ukuzifundisa kwakhona kwisicelo yayilelona candelo linzima!
Ke-nazi ezinye iingcebiso zabaqeqeshi kunye nabadlali ngokufanayo abenza umsebenzi omninzi kwiikhompyuter zabo:
Gcina imali kwinethiwekhi yokugcina isixhobo.
Sebenzisa isixhobo sokugcina uthungelwano. Lonke ithuba olifumanayo, khuphela ngaphezulu komsebenzi owenzayo kuwo.
Khuphela ukufakwa kwesoftware, uhlaziyo, uhlaziyo lomqhubi, kunye neenombolo zesiriyeli kwisabelo. Oku kubeka yonke into ngokukhuselekileyo kwiindawo ezimbini.
Into emnandi ngogcino lwenethiwekhi kukuba akukho yogcino kwaye ibuyise ixesha eliyimfuneko… khuphela iifayile kwi-drive, ngokukhawuleza kule ndlela. (Ndinee-backups ze-PC nganye ngaphezulu kwayo).
Kwaye ukuba ubuzibuza, iMac iyayibona ilungile nayo! Nditsho nomshicileli ekwabelwana ngaye!
tags: backupikhonkcoisixhobo sokugcina
Dec 4, 2006 ngo-9:32 PM
Nam ndingumlandeli omkhulu wesixhobo se-LinkStation. Ndinenguqulo ye-160GB ngokwam kwaye ibisebenza ngamandla phantse iminyaka emi-2 ngoku. Eyona nto ingcono kukuba ngenxa yobume besixhobo saso, akukho kugcinwa okanye ukhathalelo kunye nokutya okufunekayo.
Dec 4, 2006 ngo-10:49 PM
Emva kokuba ndithenge eyam, umhlobo wam wathenga inguqulo ye-1Tb. Ndandinomona! Uyamthanda owakhe, naye. Ndinomdla wokwazi ukuba kutheni umntu engekakhi iprinta/harddrive/wireless router okwangoku.